Ukufota ngesiphumo sephupha kwi-Photoshop enesiphumo esinomtsalane | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amaphupha kunzima ukuwaqonda amatyeli amaninzi kwaye anokuvela kakhulu kwaye abeyile, ngenxa yesi sizathu amaphupha asetyenziswe inani elininzi lamaxesha kumdlalo bhanyabhanya onobuhle obufana nobo sibubona kwifoto yokugubungela. A ukufota nefuthe lamaphupha Photoshop neziphumo ezinomtsalane kakhulu yinto elula ukuyenza kunye neziphumo ezintle ngokubonakalayo oko kuyakwenza ukuba imifanekiso yethu ifumane ixabiso elongeziweyo.
Fumana umphumo onomdla ukudibanisa ngokwahlukeneyo umaleko kwi Photoshop, ngaxeshanye uya kufunda ukusebenzisa ezinye zezixhobo exhaphakileyo kule nkqubo. Into enomdla malunga nokugqwesa obu buchule yinto enokwenzeka Sebenzisa le nto kwividiyo kuba obu buchule buhlala bunjalo. Funda ukwenza isiphumo esinokuba luncedo kakhulu kumatyala amaninzi ukuba sithatha ulwazi olufundwe koku isikhundla nakwabanye imisebenzi yoyilo en Photoshop.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukufikelela kule nto ukulala ukusebenza Photoshop kukuvula ifoto esinokusebenza nayo. Nje ukuba ifoto ivulwe kwi-Photoshop siza kuphinda-phinda umaleko ophambili. Umbono wayo yonke le nto isikhundla kukutshintsha ukubekwa kweengqimba, ukukhanya kunye nombala wemifanekiso.
El isiphumo esiza kuyiphumeza ngokubonakalayo kukwenza umfanekiso ophindaphindwe kaninzi kwaye nge Uhlobo oluthile lokubukwa kwe-surreal.
Las i ngcebiso xa usebenza Photoshop Oku kulandelayo: sebenza ngendlela enocwangco, chaza ii-layers (ukuba zininzi) soloko sisebenzisa uhlengahlengiso ukuze sikwazi ukuthatha amanyathelo nokulungisa iimpazamo, zama ukusebenza ngemifanekiso esemgangathweni, soloko ucinga ngombono ukuphinda uthinte kwakhona ngaphambi kokusebenza Photoshop.
Singaphinda-phinda umaleko kaninzi kangangoko sifuna, kokukhona maleko maxesha ephindwe kabini Photoshop eyomeleleyo iya kuba isiphumo sokulala, kule meko sizakuyiphinda-phinda kathathu.
Into elandelayo esiyenzayo yonyusa ubungakanani boluhlu oluphezulu, singakwenza oku ngolawulo lweendlela ezimfutshane + T okanye kuhlelo lwenguqu simahla. Siyonyusa kwaye sihambisa umaleko ongaphezulu de ifoto yoluhlu ibe nkulu kunaleyo ingezantsi. Into elandelayo esiyenzayo ukungabonakali okuphantsi kolu luhlu lungasentla, ngale nto sifumana olu luhlu lungasentla lubonakala ngokuthe kratya kwaye siyeke umaleko osezantsi ubonwe ngaloo ndlela ukufezekisa oko ukusebenza kabini komfanekiso.
Emva kokuhambisa kunye nokuhlisa ukungabonakali kocwecwe oluphezulu, into elandelayo ekufuneka siyenzile yile phinda inkqubo Ngawo onke amanye amacwecwe ahlala esenza into nganye kwezi. Ukuba yonke into ihamba kakuhle kuya kufuneka sifumane iziphumo umfanekiso ophindaphindiweyo mamaxesha amaninzi.
Sele sinobugcisa obuphambili be- ukulala ukusebenza Photoshop, ngoku kufuneka sifumane Iziphumo ezibonakalayo zinomtsalane ngokudibanisa iithoni ezahlukeneyo kwifoto nganye esizahluleyo. Sakha i uhlengahlengiso lolungelelwaniso kulwahlulo ngalunye, lubonisa Photoshop Sifuna ukusebenza kuphela kumaleko asezantsi, ngale ndlela sifumana umaleko ngamnye ukuba ube nombala owahlukileyo, ngaloo ndlela sifezekisa Iziphumo ezi-surreal.
Ukuba yonke into ihambe kakuhle, kuya kufuneka sibe nesiphumo esifana nesikumfanekiso ongezantsi, umaleko wohlengahlengiso kumaleko ngamnye womfanekiso.
Singadibanisa umaleko wokuqina ku ukwandisa amandla ombala, le yinto yokhetho efumana Iziphumo ezinomtsalane ngakumbi ngokubonakalayo.
Sikwazile ukwenza nge Photoshop un Iziphumo ezinomtsalane kwinqanaba lokubonwayo usebenzisa izixhobo ezilula kakhulu ezithi ayifuni ukuntsokotha okukhulu okanye ubuchule benkqubo. Photoshop usothusa kwakhona ngeyakhe amathuba amaninzi. Khumbula ukuba le ndlela yokusebenza inokudluliselwa kwezinye iiprojekthi ze-Photoshop kunye neNkulumbuso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Ukufota ngesiphumo sephupha kwi-Photoshop enesiphumo esinomtsalane